असल पिता कसरी हुने ? यस्तो छ आइडिया – आफ्नो समाचार
Afno News — २ भाद्र २०७५, शनिबार १०:३९0comment
आमा र ममता अपरिभाषित हुन्छ । बच्चालाई आफ्नो आमा प्रति जति स्नेह हुन्छ त्यति नै स्नेह आफ्नो पितासँग पनि हुन्छ । बच्चाको पालन पोषणको लागि आमाको जति जिम्मेवारी हुन्छ त्यति नै पिताको पनि हुन्छ । बच्चाहरु आफ्नो पिताको अनुसरण गरेको हुन्छ त्यसैले पिताले पनि आफ्नो राम्रो बानी व्यवहार सही ढंगले पालना गर्नुपर्छ ताकि बच्चाहरु पनि त्यहि कुराको अनुसरण गरोस् ।
१. स्वस्थ रहनु अति आवश्यक
सानो छदाँ देखि नै बच्चाहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको बानी बसाल्न सकेको खण्डमा जीवनभर बच्चाहरुमा स्वास्थ्यको महत्वको बारेमा बुझिन्छ । यसको लागि उसलाई पिताको सहि मार्गदर्शकको आवश्यक पर्दछ । विहान चाँडै उठ्ने, योग वा मर्निङ वाक, एक्सोसाइज र खेलमा बच्चाहरुमा उत्साह जगाउनु पर्छ ।
२. केही सीमा तय गर्नुस्
आफ्ना केही कुरा स्वयं आफुलाई पनि मन परेको हुँदैन र बच्चाहरुमा यस्ता केही बानी हुन्छ जुन तपाईलाई मन परेको हुँदैन । बच्चाको बानी मन परेन भन्दैमा बच्चाहरुलाई झपार्ने वा कुट्ने गर्नु हुँदैन । केही कुरा बच्चालाई पनि तपाईंको कुरा मन परेको हुँदैन । बच्चाको पालन पोषण गर्दा यस्ता कुराको बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ र यसको कारण खोज गर्नु पर्छ । तर यसको लागि कहिले पनि बच्चाहरुलाई जवरजस्ती गर्नु हुँदैन । जवरजस्ती गर्नाले बच्चाहरु दवावमा आउन सकिन्छ ।
३. समय दिनु
पुरुषलाई घर परिवारको साथसाथै आफ्नो विजनेस वा जागिरको पनि ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा परिवारलाई समय दिन सकेको हुँदैन तर सम्भव भएसम्म बच्चाहरुलाई समय दिर्छ । हप्तामा कम्सेकम एक दिन आफ्नो छुट्टीको बेला आफ्नो केही समय बच्चाहरु लागि पनि दिनुपर्छ । समय भएको बेलामा बच्चासँग खेल्ने वा उसलाई कहि घुमाउन लिएर जानुपर्छ ।
४. बच्चाको कुरा पनि सुन्नु
५. प्रेमको भाव सिकाउनुहोस्
आरोहीहरु सगरमाथा आरोहणको प्रमाण पत्र नै लिदैनन्